Idama lokuhlambela liTnkila Uphawu Lwezindlu zangasese ezikumgangatho ophezulu | WOWOW IiFaucets-WOWOW IiFaucets
Ikhaya / Blog / Iphuli yokuntywila isinki uphawu lwendlu yangasese ephezulu
Iphuli yokuntywila isinki uphawu lwendlu yangasese ephezulu
2020 / 09 / 16 uhleloBlog 8107 0
U-Pricey Ed: Bendiqhele ukuba mva nje kwindawo yokutyela eneentyatyambo kwaye isinki yangasese ibonakala ngathi yitafile enkulu yeglasi egobile kwicala lendawo yokuhambisa amanzi phakathi. Ndinqwenela ukukhangela ukuba loluphi uhlobo lokuntywila kwaye ngaba ziyafikeleleka kwiindawo zokuhlala?
-UJohn, eNew York
Ixabiso likaJohn: Ukusuka kwinto endinokukwazisa ngayo ungachaza isinki yokuhamba yangasese eshukumayo.
Isinki zinokuyilwa zenziwe ngesiqwenga seglasi esinoxanduva lokufana namanzi adlakadlaka. Njengoko unokucinga malunga, uninzi lweesinki zokuntywila echibini zizinto eziphezulu ezinokuthi zikhule zibe yindawo ephambili kuyo nayiphi na indlu yangasese.
Ngenxa yomlinganiso wayo omkhulu woxande kunye nefom egobileyo, amanzi ahamba ngobunono ecaleni kweesinki kumjelo ogobileyo ukuya emanzini.
Isinki zinokufakwa kwii-loos zokuhlala, nangona kunjalo fumana isicatshulwa esipheleleyo somsebenzi wesinki yokuhamba phambili ukuze ungazifumani ngaphezulu kwentloko yakho.
Ixabiso le-Ed: Kwikhitshi lam elitsha ndifuna itephu yombhobho wekhitshi ephethe izinto ezimbini enesitshizi se-facet. Ndiyazi ukuba kukho inani lokutsala okuntsonkothileyo kunye nesivumelwano esinye kunye neempompo kwintengiso, nangona kunjalo uyakwazi ukundazisa ezinye zeendlela zokuphatha ezimbini zokuphefumla endinokukhetha kuzo?
-UShelly, ilizwe laseWashington
Ixabiso likaShelly: Ndizophula iitephu ezimbini zokuphatha iikhitshi kwiiklasi ezintathu zaseprayimari. Khetha iklasi ehambelana nawe kakhulu kwaye ufumane apho:
1. GQIBA IINTABA EZIMBINI
Iindleko ziyahluka ukusuka kwezantsi ukuya kugqitywe kakhulu. Oku kunokuba yimingxunya emithathu emiselwe ngesithuba sesine sokutshiza i-facet spray. Ukunyuka kweedeksi kunokwamkela ipleyiti yomgangatho okanye izinto ezithile zomntu.
2. UMMANDLA OMNYE WESIMBINI
Phakathi ukuya esiphelweni sesiphelo sefayiphu enesikhewu sesibini esifunwayo sokutshiza umba. Isibambo ngasinye siyilelwe kwintlanganiso yespout ekhulayo.
3. IIBHUKHI ZEBHANSI ZAMABINI AMABINI
Ukonyusa isiphelo sombhobho ophethe izibambo zetompu ezijoyina njengebhulorho ngaphezulu kwesinki.
Ngokudibene ne-facet spray sink gap, unokukhetha phakathi komzimba ombini okanye onemingxunya emithathu, nangona uwela ibhulorho ngelixa ufika apho.
Ngaphambili :: Izixhobo ezinengqiqo zilungisa ubuchule bendlu yangasese next: Ngaba Amacebo okucoca Faucet Ayasebenza?
2022 / 01 / 27 221
2022 / 01 / 27 197
2022 / 01 / 25 798
2022 / 01 / 23 1004
2022 / 01 / 23 1050
2022 / 01 / 23 946